Ka quud gacanta
Mashiinka saxaafadda kululaynta
Mashiinka iibka kulul: mashiinka alxanka jeebka oo otomaatig ah
Foosha ayaa noqon doonta tan ugu qaalisan mustaqbalka. Otomatiggu wuxuu xaliyaa dhibaatooyinka gacanta, halka dijitalisyadu ay xaliso dhibaatooyinka maamulka Waxsoosaarka caqliga badan ayaa ah xulashada ugu fiican ee warshadaha. Mashiinka alxanka tooska ah ee alxanka, 4 tilmaamood isla mar isku laaban jeebka, laabashada iyo tolida ...
Fursadda mashiinka alxanka jeebka leysarka ee 2021
Ka dib markii warshadaha mashiinka harqaanka ay soo mareen "aamusnaantii" sanadkii la soo dhaafay, sannadkan suuqa wuxuu keenay dib u soo kabasho xoog leh. Amarada warshedeena ayaa sii kordheysa waxaana si cad uga warqabnaa soo kabashada suuqa. Isla mar ahaantaana, keenista spar-ka hoose ...
Qalabka taxanaha ah ee loo yaqaan 'TS-199 set' jeebka waa mashiin xawaare sare oo otomaatig ah oo loogu talagalay dharka tolidda dharka. Mashiinadan dejiya jeebka waxay leeyihiin saxsanaan tolmo oo tayo sare leh. Marka loo barbardhigo soosaarka gacanta ee soojireenka ah, waxtarka shaqada waxaa lagu kordhiyay 4-5 jeer. Mid ...
Wali miyaad ka walwalsan tahay inaadan helin shaqaale xirfad leh? Wali miyaad ka walwalsan tahay kor u kaca qiimaha shaqaalaha? Wali miyaad ku degdegaysaa amarka in la dhammeeyo? Weli miyaad ku dhibsanaysaa kakanaanta iyo gaabiska jeebka tolidda loogu jilo jeebka? Shirkadeena ayaa dhawaan d ...
Shirkadda ayaa dhistay dhisme warshad cusub waxayna ku dartay 20 khadadka wax soo saarka dhalaalaya oo dhalaalaya, iyada oo wax soo saar maalinle ah 15 tan. Hadda waxaan haynaa koox farsamo oo xoog leh, oo aan la kulanno baahiyaha dalal kala duwan oo loogu talagalay ISTICMAALKA maaskarada iyadoo loo eegayo baahiyaha kala duwan ee macaamiisha kala duwan ee aan caadiga ahayn cus ...
shaqeeyaa Our shirkadda la dhar Changying non-leh tolmo wanaagsan Co., Ltd si loo kordhiyo khadadka-soo-saarka. Hada wax soo saarka maalinlaha ah ee dharka aan tolmada lahayn waa 10 tan, wax soo saarka dharka dhalaalayana waa 3 tan. Si adag loo kormeeray dhammaan alaabta ceeriin ah, Tayada ku jihaysan laga soo bilaabo waxyaabaha aasaasiga ah ilaa masterbatch.
Xilliga silica ba'an ee loo yaqaan 'coronavirus' ee Shiinaha, shirkadeena waxay ka heshay tilmaamaha dowladda inay soo saarto mashiinka maaskaro iyo maaskarada. Shirkaddayadu waxay sidoo kale si dhakhso leh u abaabushay shaqaale farsamo si ay u fuliyaan R & D iyo wax soo saarka. Maaskarada aan soo saarnay waxay gaareen heerkii ugu sareeyay ee indu ...
Ilaa dhamaadka 2019, waxaan haynaa leyn buuxda oo mashiinka jeexjeexa, mashiinka dharka tolida, bartanka, Walaalka mashiinka tolida, Mashiinka qaabka tolida nooca Juki, Kabadhada qashinka, iyo mashiinka dhejiska luul, iyo noocyada kale ee mashiinada tolida otomaatiga ah. 1. Mashiinka dejiya jeebka: jeebka taxanaha ah ee 199 ...
Badhtamihii Noofambar, Waxaan U Tagnay Ameerika Agent Tababbar Jeeb otomaatig ah
Tababar ay ka mid yihiin: 1. sida loo sameeyo barnaamij. 2. Sida wax looga beddelo barnaamijka. 3. sida loo beddelo clamps-ka loona hagaajiyo mashiinka jeebka jiiniska, intaas ka dib waxaan barnaa sida loo beddelo haynta oo loogu hagaajiyo mashiinka jeebka shaati. 4. Sida loo xaliyo dhibaatada marka ...
Dhamaadka Nofeembar, 2019, Waxaan u aadnay Warshadda Macaamiisha Bangladesh ee Tababarka Mashiinka Qalabka Jeebka ah.
Kahor intaysan isticmaalin hal mashiin bir bir ah, ka dibna mishiin otomaatig ah oo jeebka lagu shito. Hada isticmaal mashiinadeena jeexjeexa jeebka bilaashka ah ee birta, wuxuu badbaadin karaa shaqaalaha, iyo waqtiga. Farsamo yaqaan macaamilku aad ayuu wax u baranayaa. Markay baranayaan, sidoo kale waxay sameeyaan rikoodh. Farsamo yaqaannadu aad bay u caqli badan yihiin. Kadib sev ...